Iindaba - yintoni ilaphu leTwill?
Umtya we-warp kunye weft ubethelwe ubuncinci kanye, kunye ne-warp kunye ne-weft interlacing nafasi zongezwa ukuze zitshintshe ubume bendwangu kwaye ngokubhekisele kuzo kuthiwa zi-twill weave.
Ubume bendwangu zi-twill ezimbini eziphakamileyo kunye ne-45 ° yengubo eseleyo ye-diagonal, le pateni yangaphambi kokuba icace gca kwaye umva wengubo emibalabala awubonakali. Amanani e-warp kunye weft asondele omnye komnye, kwaye uxinizelelo luphakamile kancinci kunobunzima beft, kwaye izandla ziziva zithambile kune khaki.
Ingca eluhlaza engaphezulu kwama-32 (i-18 intshi okanye ngaphantsi) intambo yekotoni yemitya yentsimbi kunye neyentsimbi; kulungile
Ilaphu le-twill lenziwe ngemisonto yekotoni engu-18 okanye ngaphantsi (i-32 inches okanye nangaphezulu) njengearp kunye ne-Weft. I-Twill imhlophe, idibene kwaye inemoto, kwaye ihlala isetyenziswa njengengubo yendawo yokusebenzela, iimpahla zemidlalo, iilokhwe, ilaphu le-emery kunye ne-spacers. Ingca ebanzi edibeneyo inokusetyenziswa njengephepha kwaye inokusetyenziswa njengephepha lokulala emva kokuprinta. Umbala kunye neendidi zeendwangu ezintle zewindows zenziwe ngombane okanye zekhalenda kwaye zinokusetyenziswa njengeeambrela okanye iziqwengana zempahla.